Ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy S7 ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy S7 ọhụrụ
Ruo izu ole na ole ugbu a, anyị amalitela ịmara asịrị mbụ banyere nkọwa, atụmatụ na nkọwa nke ọhụrụ Samsung Galaxy S7, nke enwere ike igosi ya n'ọdịnihu dị nso ma na-echeghị dị ka n'oge gara aga na Mobile World Congress na Barcelona. Ekwentị a sitere na ụlọ ọrụ South Korea doro anya bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị atụ anya maka 2016 a yana n'ezie maka anyị.
Maka oge ahụ enweghi ụbọchị amara maka ngosipụta nke ọrụ nke Galaxy S7 a, ọ bụ ezie na asịrị na-egosi na enwere ike igosi ya n'isi nso. Maka ihe a niile, anyị ga-aga kọmpụta ihe niile anyị maara banyere ngwa mkpanaka a n'isiokwu a, ọ bụ ezie na anyị adọọla gị aka na ntị na ọtụtụ ozi ị ga-agụ ebe a bụ naanị asịrị na ọ bụghị ozi gọọmentị ma kwenye.
1 Samsung Galaxy S7 ga - adị na ụdị anọ dị iche iche
2 Nhazi ahụ ga-arụpụta site na Qualcomm ọzọ
3 Okpomọkụ ọkpọkọ ga-eme ka ihe nhazi ọhụrụ ahụ dị jụụ
4 Igwefoto ga-akawanye mma
5 3D Touch ga-abụ eziokwu
6 Nloghachi nke oghere kaadi microSD
7 USB Type C connector ka imeghari ka oge ohuru
8 Ọnụ ego Galaxy S7 ga-abụ 10% na-erughị Galaxy S6
9 Kedu mgbe Samsung Galaxy S7 ga-eweta?
10 Mkpebi kpamkpam
Samsung Galaxy S7 ga - adị na ụdị anọ dị iche iche
Samsung Galaxy S6 kụrụ ahịa na nsụgharị atọ dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'otu oge, na-egosi ọdịiche dị na ama ndị gara aga. The Galaxy S7 ga-aga otu nzọụkwụ n'ihu na nwere ike iru ahịa ahụ na nsụgharị dị iche iche anọ, oge a site na mbido.
Dị ka asịrị niile si dị, ụlọ ọrụ South Korea ga-ebido Galaxy S7, Galaxy S7 gbakwunyere (ya na nnukwu ihuenyo), Galaxy S7 ihu (yana ihuenyo gbagọrọ agbagọ) yana Galaxy S7 ihu gbakwunyere (nwere nnukwu ihuenyo ihu). . Na mgbakwunye, yana nchebe zuru oke, anyị nwere ike ịchọta ọhụụ ọhụrụ Samsung n'ọtụtụ agba dị iche iche ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike ịhọrọ nke kachasị amasị ha.
Nhazi ahụ ga-arụpụta site na Qualcomm ọzọ
Samsung rụpụtara ndị nhazi ya maka Galaxy S6 maka oge izizi ya, nwere nsonaazụ dị egwu. Otú ọ dị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ o yiri ka o siri ike nghọta, ụlọ ọrụ South Korea ga-adabere ọzọ na Qualcomm maka Galaxy S7 ọhụrụ ya.
Ọzọkwa dị ka ndị niile asịrị na leaks na pụtara, ọhụrụ Samsung flagship ga-efego a processor Qualcomm Snapdragon 820,, ọ bụ ezie na ọ na-kwuru na e nwere ike dị iche iche nsụgharị na onwe-mere processors na a yiri nnọọ arụmọrụ ka Qualcomm si.
Okpomọkụ ọkpọkọ ga-eme ka ihe nhazi ọhụrụ ahụ dị jụụ
Qualcomm si Snapdragon 820 ga-abụ ihe nhazi ọhụrụ nke Samsung Galaxy S7 na iji zere nsogbu ikpo ọkụ nke meworo na smartphones ndị ọzọ na ahịa, ụlọ ọrụ South Korea emebela ọkpọkọ okpomọkụ nke ga-abụ ọrụ maka ịgbasa okpomọkụ nke nhazi a.
N'oge ahụ enweghị nkọwa zuru oke mara maka sistemu jụrụ oyi ọhụrụ a, mana ọ dị ka Samsung achọghị ịhapụ imeghe ohere na ngwaọrụ ya na-ata ahụhụ site na nsogbu oke ọkụ. Ofbọchị ngosipụta nke gọọmentị bụ iche n'echiche na anyị ga-ama nkọwa ọhụrụ banyere sistemụ a anyị ga-ahụ n'oge ọ bụla yana nchebe zuru oke ka ndị nrụpụta ndị ọzọ na-edegharị maka ekwentị ha.
Igwefoto ga-akawanye mma
Igwefoto nke Samsung ngwaọrụ mkpanaka apụtawo maka nnukwu ogo ya na maka ohere ha na-enye ndị ọrụ. Nke nke Galaxy S7 ga-aga n'ihu na-akawanye mma maka nke a ụlọ ọrụ na-agba Choi Gee-see ga-etinye ihe ihe mmetụta ọhụụ akpọrọ Britecell nke egosilarịrị ndị isi ụlọ ọrụ ahụ.
Amaghi ihe omuma banyere ya, obu ezie na dika ihe meworo, o gha eme ka oru oma nke igwe ese foto di na gburugburu ebe di ala, otu n’ime isi ike kachasi ike nke igwefoto Samsung.
Site na igwefoto Galaxy S7 anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na Samsung nwere ike ịmekọrịta ndị ọzọ na ahịa dị ka igwefoto dị ike nke LG G4, nke na-enyekwa anyị ohere iji ya na usoro ntuziaka, nke nke Xperia Z5 ma ọ bụ nke iPhone 6S, nke n'agbanyeghị na ọ gaghị etu ọnụ nke megapixels, ọ na-etu ọnụ ihe onyonyo dị elu.
3D Touch ga-abụ eziokwu
The iPhone 6S rutere n'ahịa na-etu ọnụ banyere teknụzụ ọhụrụ Force Touch, nke na-enye onye ọrụ ohere dị iche iche site na ịpị na ọkwa dị iche iche nke ike na ihuenyo. Ndị nrụpụta ndị ọzọ ekpebiela i imitateomi ọrụ a, nyere ezigbo nnabata nke o nwere n'etiti ndị ọrụ na ndị mmepe, ma mgbe Huawei mejuputara ya na Mate S, ugbu a Samsung ga-etinye ya na ọdụ ọhụrụ ya.
Baptizim dị ka 3D Touch N'ụbọchị ikpeazụ enwere ike ịkọ nkọ na ọ ga-abụ njirimara ngwaike ma ọ bụ a software emejuputara. N'agbanyeghị eziokwu na ọhụrụ data na-leaked kwa ụbọchị, ọ bụ karịa yikarịrị ka anyị agaghị ahapụ obi abụọ ruo ụbọchị nke ukara ngosi nke a ọhụrụ Galaxy S7.
Nloghachi nke oghere kaadi microSD
Otu nnukwu ntụpọ nke ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ na nsụgharị dị iche iche nke Galaxy S6 bụ enweghị oghere kaadi microSD nke na-enye gị ohere ịgbasa ebe nchekwa dị n'ime. Samsung yiri ka ọ mụtara site na mmejọ ya na nke ọhụrụ Galaxy S7 anyị ga-ahụ nloghachi nke oghere kaadi microSD Nke ahụ ga-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, iji nweta ama nwere obere nchekwa wee gbasaa ya site na iji otu kaadị ndị a.
Obi abụọ adịghị ya, enweghị oghere kaadi microSD bụ isi ihe na-adịghị mma na ọtụtụ smartphones nke ọ na-anọghị na Samsung achọghị ka akatọ ya, dị ka Apple, na nke a. N'ezie, nke a ga - emetụta nsụgharị nke ọdụ anyị na - ahụ, na nchekwa nchekwa. O yikarịrị ka anyị ga-ahụ nsụgharị 32 na 64 GB ma ọ bụ ọbụna n'ihi na ọ bụghị otu ụdị, ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ gaghị adị.
USB Type C connector ka imeghari ka oge ohuru
More na ndị ọzọ mobile ngwaọrụ ekwukwa a njikọ USB Cdị C na Samsung Galaxy S7 ohuru agagh adi iche ma gha aghaghari otu n’ime ihe ndi ohuru a na agbanwe agbanwe nke n’enye ndi oru ihe di nma, obu ezie na oga eme anyi ka anyi dochie eriri USB nile anyi nwere ugbu a.
Achọghị atụmatụ a na ọ bụ naanị asịrị na-enweghị nnukwu ike, na ọtụtụ ekweghị na ọ bụrụ na Samsung etinyeghị chaja a na Galaxy S6 ihu ọhụrụ gbakwunyere, nso nso a, ọ dị ka ọ bụ naanị ọnwa ole na ole ka e mesịrị ka ha ga-etinye ya na ekwentị ọhụrụ ha.
Ọnụ ego Galaxy S7 ga-abụ 10% na-erughị Galaxy S6
Ahịa nke Samsung na-adaba n'ụzọ dị egwu n'oge ndị a, ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-amatawanye ogo na ike nke njedebe ya. Iji dozie nsogbu a maka ụlọ ọrụ South Korea kpebiri iji belata ọnụahịa nke Galaxy S7 ọhụrụ. Dị ka asịrị niile si dị Ọkọlọtọ ọhụrụ a nwere ike ịdị ọnụ ala karịa Galaxy S6, ihe ruru 10%.
Ọzọkwa data a abụghị ndị ọrụ gọọmentị ma ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ikwenye, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na Samsung iji belata ọnụahịa nke ama ọhụụ ọhụrụ ya iji gbalịa ime ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ kwenye. N'ezie, ọ dịghị onye na-atụ anya na ọnụahịa ahụ ga-abụ onyinye n'ihi na ọ ga-anọgide na-adị elu, ọ bụ ezie na dị ka nkasi obi anyị nwere ike ịsị na ọ dị ọnụ ala karịa Galaxy S6.
Kedu mgbe Samsung Galaxy S7 ga-eweta?
Ọ bụrụ na anyị ga-eduzi ihe Samsung mere na afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ga-ekwu n'enweghị obi abụọ ọ bụla na a ga-ewepụta Galaxy S7 ọhụrụ na Congress World Congress ọzọ. Otú ọ dị, ọ ga-abụ na ihe karịrị ike ọchịchị na ụlọ ọrụ South Korea mebiri atụmatụ ahụ na ngosi nke Galaxy S6 ihu tinyere Galaxy Note 5.
Ọtụtụ asịrị na-egosi na enwere ike igosi S7 Galaxy a na ụbọchị mbụ nke 2016, na mmemme nkeonwe, si otú a na-ewepụ onwe ya n'oké ihe omume ọ bụla nke nwere ike izuru ọkwá ukwu na karịa ihe niile site n'ịgwụ ha ike na ụbọchị dị iche, wezuga nkwupụta nke ndị nrụpụta ndị ọzọ. Agbanyeghị, maka ọtụtụ, gụnyere m, ụbọchị a adabaghị ma ọlị. Ma ọ bụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji wepụta ọhụụ ọhụụ, naanị mgbe mkpọsa Krismas ebe ahịa ekwentị na-agbadata. Ọ bụrụ na m ga-akụ nzọ m ga-enwe mmasị n'ihe ngosi na February ma ọ bụ Machị, ee, na ihe omume nke onwe ma ọ bụghị n'ime usoro nke MWC dị ka ọ dị na mbụ.
Otu ugboro n'afọ, dị ka à ga-asị na ọ bụ ọrụ, Samsung na-eweta ọkọlọtọ ọhụrụ ya. Ugbu a na igba egbe nke Galaxy S7 na-eru nso, m na-eche mgbe anyị nwere ike ịhụ ya na eze na ihe ozi ọma ọ ga-enye anyị. M na-echekwa ma ọ bụrụ na ụdị ụdị a dị mkpa kwa afọ, nke m na-aza na enweghị obi abụọ maka ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị. Olileanya otu ụbọchị Apple, Samsung na ọtụtụ ndị na-emepụta ekwentị mkpanaaka ga-amata na ịnwe ụdị ama ama a dị oke ọnụ maka anyị imegharị ya kwa afọ n’emebighị emebi.
Mgbe echiche a gasịrị, ọ bụrụ na njirimara niile a na-akọ maka Samsung Galaxy S7 gosipụtara, ekwenyesiri m ike na anyị ga-eche ihu otu n'ime ọdụ kacha mma n'ahịa, nke ga-etu ọnụ maka ọnụego belatara na ọ bụ ezie na ọ ga-abata nwere ike ibia ụgwọ ọnwa jọrọ ọnụ nke January nwere ike ịbịa n'oge dị mma maka ọtụtụ.
Ì chere na Samsung ga-eju anyị anya ma hapụ anyị ka anyị na-emeghe ọnụ ya na Galaxy S7 ọhụrụ ahụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nke a bụ ihe niile anyị maara banyere Samsung Galaxy S7 ọhụrụ
Nke a nwere ike ịbụ onye njikwa Nintendo NX
Sci-fi ship size tụnyere